new Rapidleech sites working 100% — MYSTERY ZILLION
new Rapidleech sites working 100%
February 2009 edited October 2009 in Rapidshare Account
ကျွန်တော်အခု အင်တာနက်မှာ ၀င်နှောက်ရင်းနဲ့ တွေ့မိတဲ့ ဆိုဒ်လေးပါ.. ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ တော်တော်အဆင်ပြေမဲ့ rapidleech site လေးပါ။
ဆိုဒ်တစ်ခုထဲမှာ rapidleech server 10 ခုတောင်ထားထားတာပါ။
တွေ့မိတဲ့ Forum links ကတော့
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ တော်တော်အဆင်ပြေမဲ့ rapidleech site လေးပါ။
RapidLeech ဆိုတာ Rapidshare.com မှ Download လုပ်တာတွေကို ဘယ်လိုအကူညီပေးလဲ ?
ဒီဟာလေး စမ်းကြည့်ကြပါဦးဗျ.. premium account ပါမပါတော့မသိဘူး .. server 20 တောင်ပါတယ်..
ကျွန်တော် သိသလောက်က Rapid Leech မှာအောက်ပါ file hosting site တွေက premium အကောင့်တွေထည့်ထားနိုင်တယ် (ပိုထည့်လို့လဲရချင်ရမယ်) ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်မရှိပါ ဥပမာ RL မှာ rapidshare premium ထည့်ထားရင် R L server ထဲကို transload အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ ပြောင်းယူလို့ရတယ်.. ပြီးမှတဆင့် ကိုယ်ပိုင်တဲ့ .. RL server ထဲကနေ ပြန်ဒေါင်းရတာပါ .. မှားတာရှိရင်ဖြည့်စွက်ပါ.. :D စမ်းချင်ရင် ဒီမှာ စမ်းပါ . ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးနော် ရှာထားဖွေထားတာ ... :D
This is i found site tested 0n 25.9.09
၈၅% အာမခံ ပါ တယ် (၂.၉.၀၉)
မရတော. တဲ site လေးတွေ ကို ပြန် ပြော ပေး ကြပါ
ကျွန်တော်ကြားဖူးတယ် မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စားတဲ့၊
Do you Like download from Rapidshare.com?
You are Free User?
Your connection is limited?
No problem, this software will help you get the best performance.
2.Set your best performance
3.And click Start Button
In Myanmar term, :P
သင် Rapidshare မှ ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်ဒ်ဆွဲချင်ပါသလား? သင်ဟာ ပိုက်ပိုက်မပေးဘဲနဲ့ ဖရီးသုံးမယ့် ယူဇာလား? သင့် ကွန်နက်ရှင်ကို အကန့်အသတ်လုပ်ခံထားရလား? ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြဿနာမရှိပါဘူး.. ဒီဆော့ဖ်၀ဲလ်လေးကို သုုံးကြည့်လိုက်ပါတဲ့..
သုံးပုံသုံးနည်း (User's Manual)
ဆော့ဖ်၀ဲလ်ကို ဖွင့်လိုက်ပါ..။ သင့်ရဲ့ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ. (ဘာမှန်းတော့ နားမလည်ဘူးဗျ.. ဒီတိုင်းသာ ပြန်လိုက်တာပဲ.. မှားနေရင် ပြန်ပေးကြပါဦး. :70:) Start ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ.. တဲ့..
ဒါလေးပါပဲ.. အနော်တော့ မစမ်းကြည့်ရသေးဘူး.. အနော့် အာအက်စ်လေးကြွသွားမှာစိုးလို့.. စမ်းသုံးကြည့်ကြပြီး အကြောင်းပြန်ပေးကြပါနော်.. :P
ဒီမှာဒေါင်းပါ.. (RS link မပေးတော့ဘူး အော်ကြမှာစိုးလို့ ) 4shared နဲ့တင်ပေးထားတယ်နော်..
4 share က မရဘူး
ပိုက်ပိုက်လဲမရှိ ရှိလဲပေးမရတဲ့ သူတွေပါ
ကို zawlinoo အတွက်ပါ...
ကိုကို၀င်းအစား ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ifile နဲ့ပါ။
ညီကိုတွေအားလုံး ကျန်းမာစွာနဲ့ လောကအကျိုုုုးသယ်ပိုးနိုင်ပါစေ၊